कसले दियो जन्मदिन अगावै मुन्द्रेलाई यस्तो सप्राइज ? « Ramailo छ
कसले दियो जन्मदिन अगावै मुन्द्रेलाई यस्तो सप्राइज ?
हाँस्याव्याङ कलाकार जितु नेपालको आज जन्मदिन हो । तर फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ टिम र रेडियो अडियोले जितुको जन्मदिन बुधबार नै मनाइदिएको छ । बत्तिसपुतलीस्थित एक क्याफेमा जितुको जन्मदिनको सप्राइज रुपमा वर्थ डे केक काटिएको थियो ।
जितुको वर्थ डे इभ सेलिव्रेसनमा उनकी पत्नी, दिपकराज गिरी, दिपाश्री निरौला, सिताराम कट्टेल, बर्षा राउत, स्वस्तिमा खड्का र रेडियो अडियोको टिम उपस्थित रहेको थियो । उनीहरुले जन्मदिनको केट काट्दै रमाइलो गरेका थिए । आफुलाई सप्राइज दिने सबैलाई धन्यवाद दिए । असोज ११ ‘छक्का पञ्जा २’ मा जितु निर्माता, कलाकार र स्क्रिप्ट राइटरको रुपमा आवद्ध छन् ।
हाँस्यव्याङग्य क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाएका जितु उर्फ मुन्द्रे कति बर्षकाभए होलान् त ? ‘मैंले त गन्नै विर्षेछु’ उनले रमाइलो पारामा भने । आफ्नो क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान वापत जितुलाई प्रवल जनसेवा श्री पदक दिने गणतन्त्र दिवसमा घोषणा भएको छ । भिडियो हेर्नुस् :